बहुरंगी विचार एकताको अर्गेलो
2017-10-06 | तितोपाटी डट कम
तोयानाथ उपेक्षित, कुवेत, हो, अव हुने चुनावी तालमेल र एकतालाई समर्थन गर्ने मान्छे पार्टीका हनुमान नै हुन ? के यस्तो टिप्पणीले तपाईको चित्त दुःख्छ ? दुख्दैन भने किन र दुख्छ भने किन ? यो सवालको जवाफ तपाई आफ्नै मनमा राख्नुस म भने आफ्नो तर्क तपाई समक्ष राख्न गईरहेको छु । यस्तै अरु पनि सवाल छन र धेरैका बहुरंगी टिप्पणीहरु पनि सामाजिक संजालमा आईरहेका छन ।
अत्यांत्यै विवादित स्टाटस राख्ने र सामाजिक सञ्जालमा घण्टा घण्टामा लेखिरहने दिल निसानी ले लेखेछन बरु हातै काट्छु तर सूर्यमा मत हाल्दिन । यहि मतबाट कुराको फेरो खोलौ । दिल जी एकताका प्रचण्डको घनघोर विरोधी थिए र भन्थे प्रचण्ड विर्सजनबादी भए र क्रान्तिलाई धोका दिए । तिनै दिललाई प्रचण्डले के दर्शनभेटका लागि बोलाएथे तब उनले भगवान भन्न थाले । यो एकादेशको कुरा एक बर्ष पहिलेको हो सवैलाई थाहा छ । त्यसबेला विप्लबबादी उहाँ जसरी रातारात प्रचण्डबादी बन्नु भो त्यही शैलीमा आज हात काट्न तयार भए पनि भोली निरन्तरतामा क्रमभंगता गर्दै ओलीधर हुनुहुन्न भन्ने छैन र हुन पनि जरुरी छ ।
अहिले फरक यति मात्र छ विप्लबबाट प्रचण्डमा पर्दापण भए जस्तो हुन पदैन बरु प्रचण्डका अलावा ओलीलाई पनि नेता मान्न पर्ने हो । यो सकस परिरहेको अवस्था अझै केही दिन कायम हुून्छ । जुगाँ पालिरहेको मान्छे ले खौरियो भने केही दिन सम्म आनौठो महसुस गर्दछ र अनौठै देखिन्छ, कुरा यति नै हो । सूर्यमा मरिकाट्टे मत हाल्दिन भन्नुको मतलब ओलीलाई नेता मान्दिन भन्नु नै हो । यसो भन्नु को मतलब बाम एकतालाई पनि मान्दिन भन्नु हो । बाम एकता लाई मान्दिन भन्नु अन्तत प्रचण्डलाई छाड्छु भन्नु पनि हो । यसको मतलब उहाँ बाम एकताको विरोधमा उभिनु हो ।
बामपन्थि एकताको बृहत्तर उद्देश्य दिल निसानीको दिल भन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने उहाँले विस्तारै बुझ्नु होला भन्ने लाग्छ । यदि बुझ्न भएन भने उहाँले मुलुक बुझ्न सक्नु भएनछ भनौला । यहाँ मैले उल्लेख गरेका दिल प्रतिनिधी पात्र हुन यस्ता कार्यकर्ता हजारौ छन । उनको नामै प्रस्तुत गरिरहदा कतै अपमान गरिरहेको अर्थ नलागोस । उनी मेरा पनि श्रद्धेय लेखक हुन । उनको कलमलाई म सलाम गर्दछु तर उत्तेजना, ईगो वा अस्तिको तितोमिठो भुल्न नसक्ने जिद्धी जसले गर्दछ तीनलाई सम्झाउन सक्ने तर्क दिन सक्ने दिल निसानी आफै हतास हुनु निक्कै दुःखद छ ।
तपाई जे गर्नुस वा जहाँ जानुस तर तपाईसँग बाकपटुता वा तार्किक क्षमता छ भने सवै कदमहरु सहि प्रमाणीत गर्न सक्नु हुन्छ । सवैले सहमती जताउलान भन्ने होईन, तपाईलाई मनपराउनेहरु तपाईसँग सुरक्षित रहनेछन । जसरी नेताहरु जे जे गर्दछन त्यसलाई विभिन्न तर्क दिएर सहि प्रमाणीत गर्दछन र कार्यकर्ताहरु आफ्ना नेताहरुको सवै निर्णयहरुलाई मुल मन्त्र मान्दै जप्दै हिडने गर्दछन । यस अर्थमा नेपालका राजनैतिक दलका सवै कार्यकर्ताहरुले अलिकती पनि संकोच नमानि परम्परा धान्दै हनुमान चालिसा जप्नै पर्दछ । जसले जे भनोस त्यो कुराले चित्त दुखाउन हुदैन । या त राजनैतिक दलको सदस्यता त्याग्ने हिम्मत देखाएर स्वतन्त्र नागरिक भएर विवेक चलाउन सक्नु पर्दछ नत्र नेतृत्वको निर्णयलाई शिरोपर गरेर त्यहि अनुरुपको धारणा र विचार बनाउने कुरामा दुविद्धा राख्न हुन्न । त्यसरी नै स्टाटस लेख्नुस त्यसरी नै ट्वीट गर्नुस । नेताहरु जे जे भन्दै जानेछन । अर्थात जसोजसो बाहुनबाजे उसै उसै स्वाहाँ । नैतिकता, दर्शन र सिद्धान्त कोही कसैसँग छैन तपाईसँग छ भन्ने लाग्छ भने पहिला आफ्नै भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस । कुनै पनि राजनैतिक कार्यकर्तासँग आफ्नो भन्ने केही हुदैन जो सँग छ त्यो राजनैतिक कार्यकर्ता हुदैन । विश्लेषक, समालोचक वा अन्य केही होला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ ।
बाम एकताले एउटा धु्रविकरण को अवस्था आएको छ । यो टिकाउ वा विकाउ के हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो । यसरी नै अन्य साना ठुला बाम ईतरहरु पनि अर्को ध्रुबमा केन्द्रित हुदैछन । यसले च्याउसरी नेपालका पाटीहरु भस्याकभुसुक हुनेछन यो राम्रो कुरा हो । दुई दलिय प्रतिस्पर्दा नेपालमा रहिरहे त्यो राजनैतिक स्थिरता र विकाशको लागि पनि राम्रो हुनेछ ।
यसरी एकाएक भनिएको धु्रविकरणको चुरो कुरो जे भए पनि सयवटा स्यालको शासन भन्दा एउटा सिंहको शासन उत्तम भन्ने राजनैतिक मान्यतालाई पनि बल पुग्ने भएका ले सवै खालका आग्रह वा पूर्वाग्रह त्यागेर बाम एकताको स्वागत र लोकतान्त्रि भनिएका शक्तिहरुको अर्को एकताको लागि समेत दवाव दिने अहिलेको चलायमान स्थितीमा मुलुकको हितमा नै हुने छ । अहिले एमाले,माओ वा नयाँशक्तिका कार्यकता जहाँ जहाँ छन उनीहरुको संयुक्त भेला र छलफल को अभ्यास शुरु गर्नु अधिक बुद्धिमतापूर्ण काम हुने छ । सवैलाई शुभकामना ।